I3 Nyika Yenyika Kurume inoziviswa - Iyo Nyika Kurume
musha » Noticias » Press Notes » I3rd World Kurume inoziviswa
I3rd World Kurume ye2024 inoziviswa kuForamu yeNonviolence muMar del Plata - Argentina
Mukupemberera kwe Gore rechi10 of the Svondo reNonviolence muMar del Plata inotyairwa Osvaldo Bocero y Karina Freira uko varatidziri vanobva kunyika dzinopfuura makumi maviri dze America, Europe y Africa.
Ikoko Rafael de la Rubia yakaziviswa mhenyu kubva Madrid zvirimo 2024 the 3ª Nyika Inofananidzira Rugare uye Kusagadzikana.
El Sangano reNonviolence Yakatanga nemhemberero diki uye yepamoyo yechikumbiro cherunyararo rwenyika mumitauro mitatu: español, portuguese y guarani. Yaive maminetsi mashoma ekufungisisa nekubatana pakati pevatori vechikamu.
Osvaldo akapa budiriro uye kufambira mberi kwezvakatanga se Svondo reNonviolence mukati megadziriro ye 1ª World March in the 2009 uye mafambiro akaita izvi mumakore gumi aya. Pfupiso pfupiso zvinyorwa zvakatariswa nemifananidzo yerwendo irworwo.
Isu tinoburitsa zvimwe zvezvifungo izvo Rafael de la Rubia, mutauriri we World March, akataura mukutaura kwake:
"Ndiye Nonviolence Vhiki Uyu muenzaniso wekugara kwemakore gumi, uyo unoshanda sekurudziro. Iri ibasa rakatsiga mukuitika, iro rinotiratidza nzira uye kufambira mberi.
Pazuva rino tinoda kuenda kune iyo izwi kusagadzikana
Mukutanga kwaKukadzi 2016, mu Foramu yePeña Blanca (Honduras), mubatanidzwa wevanhu MSGySV yakatanga mushandirapamwe wekuisirwa izwi rekuti kusagadzikana mu duramazwi re Dzidzo dzeSpanish Mutauro.
Izvo ndezve kutambanudzira chiito ichi kune mimwe mitauro iyo isina izwi kana. Nonviolence muRussia zvinonzi ненасилие, muchiCzech ndizvo nenásilí, muchiGerman risaiwa, muItali nonviolenza uye neChirungu nonviolence, asi muchiSpanish haipo.
Kuti izwi riverengerwe muduramazwi remutauro wechiSpanish, rinofanirwa kunyorwa kuti rinoshandiswa zvakajairika, aya ndiwo mashandisiro aro. Saka zviri kuvamiriri vezvemagariro kuti vashande kuitira kuti mashandisirwo ayo awedzerwe uye kuti zvarinoreva zvifambiswe uye zvinzwisiswe munzvimbo dzese dzinotaurwa chiSpanish.
Isu tinotora mukana we Nonviolence Zuva kuikoka kuti ishandiswe sezwi rimwe chete, pamwe chete uye pasina fungidziro, uye nekudaro tinogona kuwana izwi rakatemerwa mumutauro wechiSpanish. Ngatishandei pamwechete kuti tikurudzire mashandisiro ayo uye, pamwe nayo, kupa chinzvimbo kuzita rakakosha renhambo nyowani yemagariro.
Nonviolence Firimu Mutambo: Nhasi inotanga iyi 3-zuva reMutambo wepasi rose unosimudzirwa na FICNOVA.
Gungwa reMediterranean reMunyararo: Campaign yakatanga mu 2ª World March izvo zvinotarisira kushandura iyo Mediterranean mugungwa rerunyararo, musangano wetsika uye wakasununguka kubva kuzvombo zvenyukireya.
- Sketchbook reiyo Saure Rokunyora. 100 mapeji. Ichabuda mumasvondo mashoma. Mumitauro yeSpanish neBasque. Editions mune mimwe mitauro inotarisirwa.
- Bhuku ra Secretariat weNobel Peace Prize: Zvabvunzwa MSGySV nyora chitsauko pane kusagadzikana. Tinofanira kuendesa muna Zvita wegore rino.
-Bhuku re2nd MM. Tiri nezviri mukati uye negungano. Ruzivo rwuchiri kushayikwa kubva kune dzimwe nzvimbo.
Isu tiri kufunga zvekumirira chinguva chidiki uye nekuiburitsa kana iyo TPAN. Panguva iyoyo tinobatanidza chitsauko chakati pamusoro penyaya iyoyo.
- Basa riri kuitwa pakubata Mutambo wenyika mugari cyber-activism pane dingindira re TPAN kupemberera kupinda kwayo musimba kana ini ndazvizivisa United Nations. Isu tinoverengera kutanga kwa2021.
- Tichatora chikamu mu Kuratidzira Runyararo Perugia - Assisi inotevera Gumiguru 10.
- Musangano Wepasi Pose: In Gin pakupera kwaGumiguru, Secretariat weNobel Peace Prize akakoka MSGySV pindira pamwe nemamwe mana masangano epasi rese, kuitira kuti vechidiki vanobva kumasangano aya vaunze zvirevo, zvirongwa nezviito.
- Dunhu reMusangano weRunyararo muLatin America mukufamba kwa 2021 inotyairwa ne Mubayiro weNobel Werunyararo nerutsigiro rweguta re Merida -Mexico uye 9 mayunivhesiti mudunhu iri Maya. Muviri wedu unokokwawo MSGySV.
-3rd Nyika yaKurume
-Tinoshambadza izvo 3ª MM ichatanga muna Gumiguru 2, 2024
-Saka mu 2ª MM ichatanga nekuguma muguta rimwe chete mushure mekutenderera nyika.
-Iyo inosanganisira kushanya kwenzvimbo dzakadai se: South America Kurume, Central America Kurume, Fora kune Gungwa reMediterranean reRunyararo y Latin American Kurume. Tinovimba kuti pachave nevamwe vanozobatana. Ndinovimba tine mamashi ane chiziviso kumakondinendi.
-Iyo zvakare inosanganisira iyo chaiyo yekushanya fomati, kuitira kuti ipe yakakura kwazvo kutora chikamu kune avo vanofarira.
Karenda yeiyo 3rd World Kurume
-Pana 21/6/2021 mabheseni achazivikanwa kumaguta kunyorera 3rd MM 2024.
-Maguta anomirira anotumira kunyorera pa21 / 6/2022.
-2/10/2022 ichaziviswa uko iyo 3rd MM ichatanga / kupera.
-2/10/2024 kutanga kwe3rd Nyika Kurume.
Kubva kuna MSGySV Global Kubatanidza Chikwata Ndiri kuziviswa kuti muna Gumiguru kuverengwa kwenhengo nyowani kuchaitwa uyezve sarudzo dzechikwata chitsva chekubatana kwenyika chichaitika. Isu tinobva takukoka iwe kuti utore chikamu uye ubatanidze Nyika isina Hondo uye Chisimba.
Hapana chimwe, ndinokutendai zvikuru…
Tinotenda Liz Vasquez neshanduro yechiRungu yechinyorwa chino.